Futbol Club Barcelona (Template:IPA-ca), eyaziwa njenge Barcelona kwaye popularly eyaziwa njenge Barça, yi name club elinolwazi, esekelwe kwi - Barcelona, Catalonia, Spain.
Waseka ngowe-1899 ngokuthi iqela footballers, swiss, isingesi kwaye isicatala ebelikhokelwa Joan Gamper, club sele kuba uphawu ka-isicatala inkcubeko kunye nationalism isicatala. Ngokungafaniyo ne-eyona nto name njengesiqhelo, ukuthelekisa ifeni kukho okkt abo ukusebenza owenziwayo le club, apho isizathu isebenzisa motto "Més ukuba un club" (ngaphezu a club). Barcelona ingaba yesibini club name exabisekileyo kakhulu ehlabathini, kunye yayo ixabiso eliqikelelwa $3.2 bhiliyoni, kwaye igumbi of the name club ye-richest ngokomthetho ingeniso, kunye ingxelo yonyaka turnover ka - $484.6 million.
Domestically, Barcelona sele uphumelele 24 phinda-phinda ngo La Liga 29 we - Copa amaqela okhetho Rey, 12 kwi - Supercopa de españa, 3 Copa Kalle Duarte kwaye 2 Copa Liga, ekubeni holder ka-nani likhulu inani trophies kwi-yokugqibela ezine competitions ezikhankanyiweyo. Kwi-malunga ngamazwe name, club waba ophumeleleyo ye - UEFA Champions League kwi-5 amathuba, nge-5 uphumelele kwi - Super indebe ye-UEFA , 4 kwi - uefa Indebe Winners ' Indebe, ekubeni ukuba oku kwaba wemiceli-ophumeleleyo; iqela kanjalo umdla oyena isixa-mali amaphawu kwi - i-Izixeko Fairs Indebe, 3, elinye inani achievements kwi - Club FIFA World Cup, wokuba ngowama-2015 wemiceli-ophumeleleyo ye-tournament. Barcelona babebaninzi lokuqala indawo ehlabathini ranking ka-clubs ye - IFFHS ngowe-1997, ngo-2009, ngo-2011, 2012 kwaye ngowama-2015, kwaye ngoku luthathe iifama yesibini indawo kwi - ranking ka-clubs kwi-UEFA. Eyona rivalry ye-iqela ngu kunye Real i-madrid, apho yemidlalo edlaliweyo phakathi ezimbini njengesiqhelo ubizwa ngokuba El Clásico.
Barcelona sesinye clubs kunye nani likhulu inani ifeni jikelele ehlabathini, ngokuba iqela kunye kakhulu inani abalandeli kwimicimbi yasekuhlalweni networks phakathi kwabo bonke emidlalo. I-Barcelona abadlali kuba mbali kuba liphezulu inani achievements le mbasa kuba Footballer Lonyaka Aseyurophu, kunye nesixhenxe victories, ngokunjalo the Best umdlali ehlabathini yi-FIFA, nabane ewonke elinanye victories. Ngo-2010, i-club wenza imbali xa ezintathu yakhe abadlali competed kuba iwonga eyona umdlali ehlabathini (Messi, Iniesta kwaye Xavi) bonyulwa njengoko ezintathu eyona abadlali ehlabathini kwi - FIFA Ballon d'or 2010.
Iqela le fc Barcelona ngowe-1903.
Primeiros anos (1899-1908)[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]
Kangangokuba, Name Club Barcelona wazalwa ngoko ke cosmopolitan, ukuba paradoxically ubuya characterize kubo kunye umoya isicatala ukuba club kuphela exaltaria kamva. igama kwi - isixhosa, ulwimi ilizwe ekudalweni name, England, kwaba ngokufanayo ngexesha. Imibala ingaba kanjalo kuba wangaphandle influences: the legend ithi Gamper ange iphenjelelwe kwi-i-ka - Basel, iqela okokuba ngaphandle umphathi-mikhosi, khetha omtsha club.izakuba, ke ngoko, bomvu kwaye okwesibhakabhaka. I-red izakuba endaweni yi - grená, ngenxa yokuba lo umbala ukuba designer of the shield kokuba nokungcwatywa.
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-16 EyeSilimela 2017, kwi-22:34